थाहा खबर: भियतनाममा प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता, बुद्धका विचार विश्व समुदायलाई दिन सफल भयौं
भियतनाममा प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता, बुद्धका विचार विश्व समुदायलाई दिन सफल भयौं
नेपाल र भियतनामबीच कूटनीतिक सम्बन्ध भएको करिब चार दशक भएको छ। यति लामो सम्बन्ध भए पनि प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमण नेपालले पहिलो पटक गरेको छ। भियतनाम भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भ्रमणबारे गरिएको अन्तर्वार्ता :
प्रधानमन्त्रीज्यू भियतनामको भ्रमण समग्रमा कस्तो रह्यो?
यो भ्रमणले अब नेपाल र भियतनामबीच कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन कतिको सफल र सहज रहला?
हो, नेपाल र भियतनाम लामो समयदेखिका मित्रहरू हुन् जसको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको करिब चार दशक भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको स्तरमा यो मेरो भ्रमण पहिलो हो। यस सिलसिलामा विभिन्न पक्षसँग घनिभूत छलफल भएका छन्। अब हाम्रो कूटनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र अन्य बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ र सुमधुर हुन्छ। व्यापार विस्तार हुन्छ। नेपाली उत्पादनको निर्यात बढ्छ। करिब दश करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउनुपर्छ। यो भ्रमणबाट ती काम हुन्छन्।
यहाँले विश्व समुदायसँग आगामी वर्ष ‘युएन डे अफ भैषाख’ दिवसको कार्यक्रम नेपालको लुम्बिनीमा गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यसको तयारी के छ?
यो भ्रमण साना र विकासशील देशको सहकार्य र एकताका लागि पनि हो कि?
अवश्य पनि, हामी हाम्राजस्ता समानता भएका देशसँग सहकार्य र एकता अगाडि बढाउछौँ। हिजोका दिनमा हामीले असंलग्न आन्दोलनलाई निकै मजबुत बनाएका थियौँ, अब फेरि यस्ता सामयिक मुद्दा सशक्तरूपले अगाडि बढाउनुपर्ने छ।